१२ करोडमा बसपार्कमा के बन्दै छ ? – Muluki Khabar
१२ करोडमा बसपार्कमा के बन्दै छ ?
२०७८ पुष ३ गते, शनिबार
उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट बजारको मुख्य चोकदेखि एक किलोमिटर दक्षिण त्रियुगा नदिको पुलसँगै त्रियुगा बसपार्क रहेको छ । बसपार्क छेउमै एउटा अढाई तले भबन बन्दैछ । निर्माणधिन भबन त्रियुगा बसपार्कको लागि टर्मिनल भबन बन्दै गरेको हो । २०७६ साल असार ३१ गते धनुषा जिल्लाको रमण आइएस एनबि जेबि कन्ट्रक्शनले बनाउने ठेक्का लिएको योे आयोजनामा १२
करोड ६१ लाख ५५ हजार १३७ रुपैया लगानी परेको छ । संघन सहरी तथा भबन निर्माण आयोजना राजबिराज सप्तरी अन्र्तगत रहेको यस कार्यालयका प्रमुख सचिन्द्र कुमार देबका अनुसार हालसम्म यो
आयोजनाको काम ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ । पहिलो सम्झौता अनुसार यो आयोजना २०७७ पुस २९ गते सकिनुपर्ने हो । तर हाल सम्म पनि यो काम सकिएको छ्रैन । समयमा काम नसकिए पछि पुन समय थपिएको छ । आगामी २०८८ साल चैत ३० गतेसम्म यो काम सकिनुपर्ने हुन्छ । तर कामको गति हेर्ने हो भने सकिने छाँटकाँट देखिदैन ।
भबन निर्माण कार्यको ठेक्का लिएको रमण आईएस एन बि जेबि कन्ट्रक्शनका संचालक सन्तोष यादबका अनुसार अब काम तिब्र गतिमा हुने र चैत मसान्तसम्ममा काम सकेर सम्बन्धित निकायलाई भबन जिम्मा दिने बताए ।
भबन ठेक्का लगाउने संघन सहरी तथा भबन निर्माण आयोजना राजबिराजका प्रमुख सचिन्द्र कुमार देबका अनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले २८.०९ प्रतिशत रकम आयोजनाबाट निकासा गरी सकेको बताए । यो बसपार्कको टर्मिनल भबनमा अढाई तले एक वटा भबन, अगाडी घण्टाघर, एक वटा ट्वाईलेट, बसपार्क क्षेत्रभित्र पुरै बसपार्क क्षेत्रभरीको मेन रोडसम्म भुँई आरसिसि ढलान, माटो फिलिङ, पार्किङ, ब्लक बनाउने काम अब बाँकी रहेको छ । भबनमा निर्माण कार्यको धेरै काम अझै बाँकी रहेको छ । झ्याल, ढोका, रंग रोगन जस्ता कार्य अझै गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसो त भबन अगाडी रहेको घण्टाघरको काम पनि बाँकी नै रहेको छ ।
उदयपुर जिल्ला भित्रका निर्माण ब्याबशायीहरुले काम नपाएपछि पछि जनकपुरका निर्माण ब्याबशायीले काम जिम्मा लिएको हो । जिल्ला बाहिरका निर्माण कम्पनी भएकाले काममा लापारबाही गर्ने जोखिम बढेकाले स्थानियको निगरानी हुन जरुरी रहेको छ ।